Ngaba ukhathalelo lweeinjini zokuKhangela ukuba usebenzisa iDrupal? | Martech Zone
Ngaba ukhathalelo lweeinjini zokuKhangela ukuba usebenzisa iDrupal?
NgoLwesibini, Aprili 26, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 15, 2014 UJohn Blue
Iinkqubo zokuLawula umxholo kunye ne-SEO
Zingakanani iiNkqubo zoLawulo lweMixholo (CMS), ezifana WordPress, Drupal, Joomla!, dlala indima kwi enjini yokukhangela noun (SEO)? Ngokuqinisekileyo uyilo olubi lwesiza (hayi ii-urls ezicocekileyo, umxholo ombi, ukusetyenziswa gwenxa kwamagama wesizinda, njl.njl. Kwi-CMS enje Drupal izakuchaphazela i-SEO (izixhobo ezinkulu ezisetyenziswe ngendlela engeyiyo). Kodwa ngaba iinkqubo zolawulo lomxholo ngokwazo zibolekisa kwi-SEO engcono kunabanye, ukuba zonke ezinye iindlela ezilungileyo zenziwe? Kwaye, kungadityaniswa njani iinkqubo (ex, WordPress okanye iDrupal blog exhasa Shopify indawo) ichaphazele i-SEO (kwakhona kucingelwa ukuba zonke ezinye iindlela ezilungileyo ze-SEO ziyalandelwa)?
Ukusuka kwimbono yeinjini yokukhangela, akukho mahluko phakathi kweDrupal, iWindowsPress, okanye iShopify. Phambi kokuba ndibethwe ngu "Yima umzuzu", mandicacise. Iinjini zokukhangela zijonga i-HTML enikwa zona xa zirhubuluza kwikhonkco. Abajongi kwindawo yogcino lwedatha emva kwewebhusayithi kwaye abajongi kwiphepha lolawulo elisetyenziselwa ukumisela indawo. Zeziphi iinjini zokukhangela ezijongileyo ezenziwe yi-HTML, okanye ezinikezelweyo, yinkqubo yolawulo lomxholo.
Umzekelo: Xa usebenzisa iDrupal, kuya kufuneka ukhethe ukuvula ii-URL ezicocekileyo. Awunyanzelekanga ukuba usebenzise ii-URLs ezicocekileyo, kodwa xa usenza njalo, ufumana i-URL enokuqondwa ngumntu (ex: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / ukubonisana / ukuthengisa). Kwaye, ewe, ii-URL ezicocekileyo zinokunceda i-SEO.
Omnye umzekelo: Drupal, ngokusebenzisa Phathauto Imodyuli, iya kwenza ii-URL ezinentsingiselo esekwe kwisihloko sephepha. Umzekelo, iphepha elinesihloko esithi "Imisebenzi eli-10 yehlobo yaBantwana baKho" iya kufumana i-URL ngokuzenzekelayo ye-http: //example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Awunyanzelekanga ukuba usebenzise iPathauto kodwa kuya kufuneka uyincede ekwenzeni ukuba i-URL yephepha ibelula ukuba abantu bayifunde kwaye bayikhumbule.
Umzekelo wokugqibela: Imephu zesiza ii-injini zokukhangela ziqonde ukuba yintoni kwindawo yakho. Ngelixa unokwenza ngesandla (ug) imephu yesiza kwaye uyihambise kuGoogle okanye kwi-Bing, ngumsebenzi olunge ngakumbi kwiikhompyuter. Drupal's eKhaya XML Imodyuli kufuneka ibe nayo njengoko ivelisa ngokuzenzekelayo kwaye igcina iifayile zeemephu zesiza kwaye inika amandla okuzihambisa kwiinjini zokukhangela.
UGoogle okanye iBing abanamdla kangako wokuba uyayisebenzisa okanye awuyisebenzisi iDrupal, konke abakukhathaleleyo sisiphumo seDrupal. Kodwa ufuna ukhathalelo malunga nokusebenzisa iDrupal, njengoko sisixhobo esenza lula inkqubo yokwenza i-SEO ye-HTML enobuntu kunye nee-URL.
Ngokufutshane ngaphandle ... iDrupal sisixhobo nje. Iya kubonelela ngeempawu kunye nokusebenza okufunekayo ukuseta kunye nokuqhuba iwebhusayithi. Ayizukubhalela iiposti ezinkulu. Oko kuxhomekeke kuwe. Inye into onokuyenza ukuphembelela nayiphi na inqanaba le-SEO unolwazi olubhalwe kakuhle, olunentsingiselo kwisihloko, kwaye lwenziwe ngokuqhubekayo ngokuhamba kwexesha.
tags: CMSInkqubo yolawulo lomxholodrupalUkulungiswa kweinjini yokukhangelaidrupal seoSEO
UJohn uyiNtloko yeNdalo yoLuntu e Imithombo yeendaba eTruffle. Iinethiwekhi zemithombo yeendaba iTruffle ibonelela ngeAg Media onokuyisebenzisa, ekumgangatho ophezulu, kwimveliso yokujika kunye nokusasazwa kothotho lweendaba olujolise kwezolimo.
ChaCha + iPhone: Izilumkiso, iJografi, iimpendulo, Ukwabelana
Umgaqo-nkqubo weNtengiso zikaGoogle-Landela loo mithetho!
Epreli 26, 2011 ngo-9: 33 PM
Unyanisile, John… ii-injini zophendlo AYIKHANGELANI nokuba yintoni na iCMS yakho. Nangona kunjalo, emva kokusebenza kunye neenkqubo ezininzi zolawulo lomxholo, ndingakuxelela ukuba zininzi iinkqubo ezindala ngaphandle kwemarike ezingenazo iimpawu eziyimfuneko zokuzilungiselela ngokupheleleyo. Ukukwazi ukuhlaziya i-robots.txt, i-sitemaps.xml, i-pinging the search engines, amaphepha okufomatha (ngaphandle koyilo lwetafile), ukusebenzela isantya sephepha, ukuhlaziya i-meta data... uya kufumanisa ukuba iinkqubo ezininzi zolawulo lomxholo zinyanzelisa abasebenzisi bazo. Ngenxa yoko, umxhasi usebenza nzima kumxholo ongaxhaswanga ngokupheleleyo.
Epreli 28, 2011 ngo-12: 55 PM
Ulungile, John. Ndifumana imibuzo emininzi kwiQuora nangabanye ukuba yeyiphi iCMS eyona ilungileyo kwiSEO. Impendulo nje malunga nayiphi na inkqubo entsha yolawulo lomxholo ekwazi ukwenza ii-URL ezicocekileyo kunye nokusebenzisa izixhobo ezininzi ezisetyenziselwa iinjini zokukhangela.
@Doug – unyanisile nawe. Iinkqubo zolawulo lomxholo omdala zihlala zingenako ukubandakanyeka ngokufanelekileyo kwi-SEO.
Juni 19, 2011 ngo-1: 27 PM
Kwezinye iimeko, kwaneCMS yanamhlanje inokuba nefuthe elibi, okanye ubuncinci, ngaphantsi kwesiphumo esifanelekileyo kwi-SEO.
UJoomla, umzekelo, unesetingi yoqwalaselo lokudala inkcazo yemeta kwisiza esibanzi esiza kusetyenziswa kwiphepha ngalinye apho umbhali engenzi inkcazo yemeta yesiko. Oku kukhokelele abanye babathengi bam ukuba bacinge ukuba akukho mfuneko yokuba benze iinkcazo ezilungiselelwe iphepha.
Kumbhali womxholo onamava, oku akuyi kuba ngumba. Nangona kunjalo, zonke iinkqubo zolawulo lomxholo zinciphisa ibha kubabhali, ivumela ababhali abanamava angaphantsi ukuba bafake umxholo wabo, bengazi ngokukhathazeka kokuphucula.
Okt 21, 2011 ngexesha 1:10 AM
Ke iiCMS's zikhupha iHTML ngoko ke ziyayichaphazela iSEO. I-Drupal yintlungu epheleleyo yokuqwalasela ngokufanelekileyo kwi-SEO, kuyo nayiphi na into onokuyenza ukutyumba. iimephu zesayithi ze-xml, ii-URL ezinobubele (zihlala zibuyela kwi-/node), ii-URL ezizimeleyo/izihloko zephepha/izihloko, i-img alt tags, ukubhloga (ungandiqalisi, ukubhloga kwi-Drupal akunanto kwiWP).
Siyayithanda iDrupal yeesayithi ezinkulu, kodwa akukho mnandi ukwenza i-SEO'ify. I-WP ilula ngokweenkwenkwezi.